China hydraulic Pneumatic Tombo-kase Industry Association rivotra matihanina sampana natao soa aman-tsara ao amin'ny Yueqing, Zhejiang - China Ningnbo Yierka Tombo-kase
Lasitike Spider & Custom hiantra Part
Custom hiantra Parts
O O Ring2 Ring
Velomy ny Hammer Seal Kit
China hydraulic Pneumatic Tombo-kase Industry Association rivotra matihanina sampana natao soa aman-tsara ao amin'ny Yueqing, Zhejiang
Mazava araka izany fa Janoary 6 ka hatramin'ny 7, 2018, ny fahavalo fivoriana ankapobeny sy ny fivorian'ny birao fahavalo ny pneumatic sampana Shina hydraulic Pneumatic Tombo-kase Association Industry ireo soa aman-tsara natao tany Yueqing, Zhejiang Province. Ny lohahevitry ny fihaonana dia: New vanim-potoana? New rivo-piainana? New asa.
Cheng Xiaoxia, Filoha Lefitra Shina hydraulic Pneumatic Tombo-kase Industry Association, Filohan'ny Pneumatic Sampana, Talen'ny National Pneumatic Product Quality Fanaraha-maso sy Inspection Center, Lu Bo, Vice-Filohan'ny Pneumatic Sampana, Wang Shaoyu, Filohan'ny Guangdong Zhaoqing Fang atmosfera fanetsiketsehana Co., Ltd., sy Li Huaiwen, General Manager ny Ningbo Yadeke automatique Industry Co., Ltd. Zhang Lianren, lefitry ankapobeny mpitantana ny Wuxi Institute of Pneumatic Teknolojia, Cao Jianbo, filohan'ny Ningbo Fenghua Pneumatic Industry Association, Sun Yonggeng, solontenan'ny ny Zhang Cuogen, ankapobeny mpitantana Shanghai Xinyi Pneumatic Components Co., Ltd., sy ny vondrona mpikambana nanatrika ny fivoriana ara-potoana. Mpitan-tsoratry ny pneumatic matihanina sampana, ny Profesora Izy Feng, Profesora ny aerospace sy ny fiaramanidina, Tsinghua University, nitarika ny fivoriana.
Eo ambany ny mpitarika ao amin'ny China hydraulic Pneumatic Tombo-kase Industry Association sy ny mpiray ezaka ataon'ny mpikambana, ny pneumatic matihanina sampana amim-pahatokiana manao ny asany miasa araka ny Fanekem-Association, manohana ny foto-kevitra ny fanompoana ny mpikambana ao amin'ny orinasa, ary miezaka mba handamina hetsika isan-karazany, ary fatratra no mamarana ny hetsika rehetra navoakan'ny fikambanana. Asa asa, manodidina ny fanodinana sy ny lenta ny pneumatic orinasa, orinasa fianarana fifanakalozana, hampiroborobo ny indostria fandrosoana hanao andiana asa:
Members'meetings sy ny Filan-kevitry ny fivorian'ny dia hatao amin'ny fotoana mety, ary ny teknolojia pneumatic asa fifanakalozana dia ho voalamina tamin'izany andro izany. Tamin'ny 2014, dia avo-end pneumatic Seminar amin'ny zava-baovao sy ny fampiroboroboana ny fitantanana dia hatao any Yantai, Shandong Province, ara-teknika ary ny seminera ho an'ny faha-7 sy 2 fivoriana filan-kevitra dia hatao any Xikou, Zhejiang Province. Tamin'ny 2015, ny teknolojia pneumatic fanofanana dia hatao any Fenghua, Zhejiang Province. Ny mpitari-draharaha ny fivoriana nitarina sy ny orinasa pneumatic pirenena seminera fampandrosoana ny sampana natao tany Tiantai, Zhejiang Province. Ny fahafito faharoa mpikambana ny fivoriana sy ny pneumatic orinasa fampandrosoana seminera ny sampana natao tany Fenghua, Zhejiang Province tamin'ny 2016. Tamin'ny 2017, manam-pahaizana dia ho voalamina hitandrina ny Hanovre Industrial Exposition mba hahatakatra ny mandroso ny teknolojia, mandroso foto-kevitra ary ny farany fivoaran'ny pneumatic orinasa vahiny.
Noho ny Federasiona ho Ningbo, Fenghua, Yueqing, Cixi, Jiaxing sy ny faritra hafa hanao fanadihadiana sy famotopotorana mikasika ny fananganana indostria sampahony.
Tokony hanafainganana ny fifanakalozan-torohay, manao soa ny boky sy gazety ny pneumatic orinasa, ary hanompo ny orinasa sy ny mpiasa ao amin'ny orinasa rehetra pneumatic toro-lalana.
Fenoy ny asa fanitsiana, manangona ny "dimy taona faha-13 drafitra", ary hitarika ny salama fampandrosoana ny orinasa.
Fifandraisana akaiky amin'ny fikambanana eo an-toerana, ary hanatanterahana maro kalitao asa fanatsarana.
Mba hampiroboroboana ny docking eo amin'ny famokarana sy ny tinady, hanorina tetezana eo pneumatic orinasa sy ny orinasa mifandray.
Multi fantsona dokambarotra, hanitatra ny fitaoman'ny pneumatic matihanina sampana.
Nandritra ny fanatanterahana ny fivoriana fahafito ny Filan-kevitra, ny asa nomena izany ny Filan-kevitra Foibe dia vita soa aman-tsara, ary ny tanjona sy ny asa miasa namoaka ny zana-komity dia tanteraka soa aman-tsara. Teo ambany fitarihan'i ny filan-kevitra, ny orinasa sy ny orinasa dia mivoatra tsara, ny ankapobeny ara-teknika sy ny kalitao anivon'ny orinasa efa be kokoa, sy ny hery miasa mangina ara-tsosialy efa fanitarana. Mino mafy isika fa mitohy ny fampiroboroboana sy ny fampiharana mafy ny "Vita avy any Shina 2025" sy ny "Machine Replacement", ilay orinasa pneumatic dia mandray tsara tarehy lohataona.
NO.68 Xinzhuang Industry Zone, Gaoqiao Town, Haishu Area, Ningbo, Sina
China hydraulic Pneumatic Tombo-kase Industry ...